トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Jereo ny alalan 'ny vondrona fanahafana an'i Horukon ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko
Ny teny pachinko ny vondrona fanahafana, matetika mety raha ny tokony ho teny mahazatra Raha toa ianao ao anatinareo mahafinaritra pachinko, tsy mahazo ny fanampiana saingy nilaza fa ny tarika dia tsy fanahafana mihitsy raha ny marina. Koa satria mety hisy olona maro izay tsy zatra be dia be ho enti-mihaino, dia ny famaritana fohy. Pachinko milina koa, dia tsy miasa sy tsy manome herinaratra. Izany no tanjona, fa ny hery famatsiana takiana, matetika an-trano dia 100 volts.
Na dia izany aza, satria ny hery fanomezana ny pachinko milina dia 24 volts, ary ho lasa tahaka ny feno hery, dia ho setroka no nipoiran'io fitroarana manidina. Ny tsy manao izany, dia mila ny mpanova mba hampiova finoana ny malefaka.
ny mifandray mifandray amin'ny anankiray mpanova, aho, toy ny hoe ny vondrona fanahafana. Ny vondrona fanahafana, dia misy karazany telo lehibe. Side-by-lafiny fanahafana hatramin'ny farany isan'ny fanahafana, dia izy misy fanahafana tsy ara-dal?na. Hamantatra ny vondrona fanahafana, dia tsy misy safidy afa-tsy ny hitandrina.
ihany, mihevitra aho fa izay hevitra tsara hitandrina niditra tao amin'ny nosy Matetika no voa.
Ao amin'ny vondrona
fanahafana, araka ny azo esorina ny voa miaraka amin'ny vondrona mitovy amin'ny tsirairay, toa ho toy ny tsato-kazo famantarana avy any amin'ny efitrano conserver. Ny Ahoana no mba hamantatra ny isan'ny tanora indrindra fanahafana, ny isan'ny raharaha ny faran'ny ny sehatra izay lehibe hira dia mitovy isa, ny ambony kokoa ny mety maro ny tanora indrindra fanahafana.
mijoro dia lasa minitra, mba hilaza, dia toa sarotra ny mahatakatra sy tsy mitandrina ny ao anatiny tanteraka ny pachinko trano izy. Avy eo, dia ilany-by-lafiny fanahafana, dia toy izany mora ny mahatakatra ny anjara oharina amin'ny fanahafana ny faran 'ny teo aloha. Raha
ny antony, satria matetika vita amin'ny lafiny efatra-by-lafiny ao amin'ny vondrona dimy ny, ianao jackpot dia mety hitranga amin'ny lafiny ilany. Fandrao mandeha manodidina, ianao hizaha na ny fanaraha-maso teo no ho eo. Raha ny hira ilany-by-lafiny in
mifantoka afa-tsy ireo, dia mampitombo ny mety ny ilany-by-lafiny fanahafana. Amin'ny teny hafa, tsara kokoa fandinihana ny latabatra isa izay namely ny jackpot, ny isan'ny tanora indrindra Arakaraka Hits izany latabatra, ny avo kokoa ny mety faralahy maro fanahafana, rehefa misy hira ao
ilany-by-lafiny dia mikapoka mifantoka dia, toa tahaka ny zava-misy fa misy ny avo mety ilany-by-lafiny fanahafana. Farany, dia ny fanahafana tsy ara-dal?na, tsy ara-dal?na fanahafana no Heveriko Tena sarotra ny hilaza.
nosy misy tranga na ho manana lavitra, ary tsy mbola ao amin 'ny vondrona, ny dia olona maro no tsy mahamarika. Tahaka izany, ka hiezaka ny hitandrina ny nosy dia saika miangona hira, dia mety ho mora azo.
tsy misy ilany-by-lafiny iray, raha tsy mety amin 'ny farany dia ny fanahafana zavatra toy izany fa misy tsy ara-dal?na mety hisian'ny avo fanahafana. Mieritreritra aho fa ny olona manana ny fantatrareo, anisan'izany ny zava-misy fa misy zavatra fanahafana ny vondrona, fa, raha ny marina, toy izany dia tsy fanahafana vondrona tsy misy.
ny vondrona fanahafana fantatra, raha Asobere nipetraka teo hijoro ny mitovy fanahafana, fa izany no nilaza fa ny mety ho vao ny hira 'ny manaraka dia ambony, eo amin'ny vondrona fanahafana dia tsy tena fivarotana, dia teknika izay tsy azo ampiasaina.
aloha, dia vao pachinko parlors nandinika tsara, dia azo antoka kokoa ny fironana toy izany no nanomboka ny fanadihadiana avy amin'ny fomba na na tsy hita. Toy izany ny vondrona tsy fanahafana tsy misy.
aloha, dia vao pachinko parlors nandinika tsara, dia azo antoka kokoa ny fironana toy izany no nanomboka ny fanadihadiana avy amin'ny fomba na na tsy hita.